Forum serasera malagasy Inona no ataoko? - Dinika forum.serasera.org
Inona no ataoko?
Fitohizan'ny hafatra : Val : Inona no ataoko?
xxx - 29/09/2003 12:54
Rehefa mampirafy anao amin'ny voalohany tonga de elao fa tsy misy fika mihintsy e. Manjary manao lala-kita-kisoa. Tsy tokony hifanitsakitsaka izany. Izay no tena izy. Aza misalasala mihintsy fa elao izy. Enao nga voangaly no ho faty ankazotokana.
koty - 03/10/2003 10:41
zao no hanaovana azy,hiarao foana aloha izy ,odio fanina izay ataony,fa manomana terrain d'eterisage,manaova sipa ,dia ataovy olona serieux,avy eo dia ataovy kilao fotsiny amzay ilay mseho mlay.
rinakely1 - 08/11/2003 10:19
Hitanao, efa nandalo izany stade-ny fampirafesana ataon'ny lehilahy izany aho eny na d efa ela ihany izahay no niaraka ka hatramin'izao.
Hitako daholo ny lokony ny fijaliana ary tsapako fa ra oln marary fo d efa namohy ny aiko hatrin'ny ela aho.
Nataoko tao an-dohako fotsiny fa io lehilahy io d nofidiko tao anaty ny maro, nanolorako zay any kely ananako ka ny nandefitra foana no nataoko ary d tena nahitako vokany maro satria enao ihany no tiany, fa ny any fanalana azy indrindra ra enao no vadibe-ny. Tadidio kou fa matoa izy izay mivaralila any an-kafa d misy tsy mety ao @nao, na ny any manana zvtra tsy hitany ao @nao, na enao no manana kilema tsy mety zakana na izy fotsiny no tia tena.
Nefa aza manaiky atao an'izany foana fa refa tsy zakanao d miala moramora aza manao farateny velively, aza mankahala azy ireo akory fa avelao izy anao zay sitrapony ihany, tonga tsy natsoana ho azy eo izy @ ora tsy ampohizina. Midika izany fa enao ihany no tiany na d mbola ao @ aza izany fahalemeny izany!
six - 26/02/2004 20:28
tsy efa nahita ze solony ve enao zao?
victor15 - 30/08/2015 15:31
aloan retraretra d tokon ofatarinao n anton amprafesany
SYLLA8 - 09/10/2015 05:48
n hvtr aloh d aleo aloh mfmpiresk tsar aloh de ho hita eo n avalin rh ohtr k ten tia iz!